कस्तो छ चलचित्र ‘बुलबुल’ ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home मनोरञ्जन कस्तो छ चलचित्र ‘बुलबुल’ ?
काठमाडौं : ‘बिहेको भिडियो’ र अहिले फटाफट बनिरहेका नेपाली चलचित्रबीच के भिन्नता छ ? जवाफको लागि ‘फरक छुट्याउ’ शैलीमा घोत्लिनुपर्छ । यसको प्रष्ट संकेत के भने, नेपाली सिनेमाबाट निर्देशकीय उपस्थिति हराउँदैछ ।
नतिजा, ६ दशक लामो फिल्मी अभ्यासपछि पछि पनि हामी ‘सिनेमा कस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने आधारभूत प्रश्नमा अल्झिएका छौं ।
यो प्रश्नको गाँठो केही हदसम्म फुकाउनेछ, फिल्म ‘बुलबुल’ले ।
हरेक दृश्य, अझ भनौं हरेक शटमा निर्देशकको रचना-शिल्प कसरी पोतिन्छ ? घतलाग्दो जवाफ छ, बुलबुलसँग । विनोद पौडेल निर्देशित फिल्ममा कथाको दस्तावेज छैन, उपदेश छैन, आर्दश छैन, सन्देश छैन, तर्क छैन । अव्यक्त कथा छ, अदृश्य पीडा छ । र, त्यसलाई पोख्ने रहरलाग्दो ‘सिनेम्याटिक’ भाषा छ ।
आवरणमा यो एक ट्याम्पु चलाउने महिलाको कथा जस्तो लाग्छ । कथाका सूत्रधार हुन् रणकला (स्वस्तिमा खड्का), जो ट्याम्पु चलाएर जेनतेन आफ्नो जीवन घिसार्ने प्रयत्नमा छिन् ।
कलिलै उमेरमा विवाह गरेकी उनी शहरको कुनै साँघुरो कोठामा भाडामा बस्छिन् । छोरीलाई होस्टल राखेर पढाएकी छिन् । डेरामा पक्षघातले थलिएका ससुरा (दीपक क्षेत्री) छन् ।
मस्त जवान रणकला विवाहित भएर पनि दाम्पत्य सुख-भोगबाट विमुख छिन् । उनका पति वैदेशिक रोजगारमा गएको ६ वर्ष नाघिसक्यो, फर्कने सुरसार छैन ।
एक साथी छिन् ट्याम्पु चलाउने भीमा (लक्ष्मी बर्देवा), जो बेलाबखत उनको घाउ आलो बनाउन आइपुग्छन्, कहिले सेकताप गर्न । भीमालाई थाहा छ, रणकलाले आफूभित्रै कति भयानक आँधी गुम्साएकी छिन् ।
मस्त जवान, त्यसमाथि एक्ली महिला । अनेक स्वार्थले जोडिन आउने पुरुषबाट बच्न उनलाई सहज छैन । यसैबीच, एक पुरुष पात्र आइपुग्छन्, चोपेन्द्र भुसाल (मुकुन भुसाल) । अर्घाखाँचीतिरका यी भोला अधवैंशे नाइट ड्युटी गर्छन्, सेक्युरिटीको । दिवा सेवाचाहिँ, रणकलाको आसपासमा झुम्मिने ।
आफ्नो ट्याम्पुको अघिल्लिो सिटमा बसेर वेपर्वाह यात्रा गर्ने चोपेन्द्रसँग रणकलाको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ ? चोपेन्द्रको आगमनले रणकलाको आँधी साम्य हुन्छ ? यस्तै उत्सुकताले डोहोर्‍याउँदै २ घण्टा लामो फिल्मले बिट मार्छ ।
ट्याम्पु चलाएर जीवन गुजार्न कति कठिन छन् वा ट्याम्पु चालक महिलाले कस्तो दशा भोग्छ भन्ने सतही र खस्रो दृष्टान्त होइन, बुलबुलको कथ्य-संचारना ।
बरु एक नारी उत्पीडन र अझ त्यसभित्र पैदा हुने ज्वराभाटाको सदृश्य अनि सजीव तस्वीर हो यो । बुलबुलले कथा भन्दैन । मानवीय भाव-आवेगलाई दृश्य भाषामा बदल्छ । सामाजिक मूल्य र मान्यताको खोक्रो अवशेषले मानवीय संवेगलाई कसरी दबाउँछ ? बुलबुलको गुदी यत्ति हो ।
अहिले हामीलाई सिनेमाका लागि कन्टेन्ट चाहिएको छ, सार चाहिएको छ, सन्देश चाहिएको छ । हासो-रोदन चाहिएको छ, द्वन्द्व चाहिएको छ, उत्कर्ष चाहिएको छ, उपसंहार चाहिएको छ । यी सबै तत्व घुलनसील भएर पनि दृश्य निर्माण उराठलाग्दो एवं टिठलाग्दो हुन्छ । जबकि यावत् तत्व भन्दा एउटा निर्देशकले आफ्नो परिकल्पनामाथि खिप्ने दृश्य-शिल्प नै सिनेमाका निम्ति खास हुन्छ ।
‘बुलबुल’ निर्देशक विनोद पौडेलले खिपेको यस्तै दृश्य-शिल्प हो ।
ट्याम्पु चलाउने एक जवान महिलालाई माध्याम बनाएर निर्देशक पौडेलले यस्ता अव्यक्त-भावको क्यानभास पोतेका छन्, जो मोहक र माधुर्य छ । कथ्य-रचनाको हिसाबले होस् वा दृश्य-भाषा निर्माणको, बुलबुल एक अब्बल उदाहरण हो ।
रणकला ति समग्र नारी हुन्, जो वैशालु वयमा नितान्त एक्लिएका छन् । पितृसतात्मक चिन्तनले ओडाइदिएको आदर्श र मान्यताको घुम्टोभित्र उनले आफ्नो इन्दि्रयलाई बन्धक बनाउनुपरेको छ । रणकलामा वैंशालु मात जरुर चढेको छ तर उनी देह-सुखको खातिर भौतारिएकी छैनन् । उनलाई दाम्पत्य-स्नेह र आड-भरोसाको खाँचो छ । तर, उनको यो रिक्ततालाई समाजले ‘चरित्रहिन’ भनी नकार्ने गर्छ ।
यही मूल मर्मलाई दृश्यभाषामा बदल्न प्रयोग गरिएका शट, ध्वनि, बिम्ब कम्ता कसिलो र झरिलो छैन ।
रणकलाले हतार-हतार चुरोटको सर्को लिएर सर्वाङ्ग शरीरमा पानी खन्याएको, शिवलिंगमा पानी चढाएको, भीमाले केरा खाएको जस्ता बिम्बात्मक दृश्यले अव्यक्त नारी कुष्ठा दर्शाउँछ । पुरुषको सामिप्य र स्पर्शका खातिर रणकलाले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउँछिन्, तर आफ्नै मनको बन्दोबस्ती गर्न सक्दिनन् । टेम्पुको टायरलाई बिम्ब बनाएर रणकलाको मनोदशा देखाइएको छ ।
यसको सशक्त पक्ष पाश्र्व-ध्वनी हो । निर्देशकले हरेक दृश्य जसरी खिपेका छन्, त्यसको लयमा ध्वनीको समायोजन गरेका छन् । बाँसुरीको सुर, मेघ गर्जन, अविछिन्न पानी तप्किएको, घडीको टिकटिक जस्ता पाश्र्व-ध्वनीले ‘बुलबुल’को कलात्मकता थप गहिकिलो बनाइदिएको छ ।
पात्रको प्रवृत्ति, हुलिया, बोलीचाली, हाउभाउ हरेक स्वभाविक र प्राकृतिक लाग्छ । फिल्ममा भरमार संवाद छैन । तर, नबेलेरै धेरै कुरा व्यक्त हुन्छ । शब्द-गठन, लवजमा आफ्नै मिठास छ । अर्घाखाँची-गुल्मीतिर बोलिने भाषा-लवज चोपेन्द्रको मुखबाट बोल्न लगाएर बेग्लै स्वाद पैदा गरिएको छ । यो एक अनुकरणिय अभ्यास हो, रैथाने भाषा-शैलीलाई समेट्ने ।
फिल्मका कुनैपनि दृश्य यस्ता छैनन्, जसमा खेलाँची गरिएको होस् र हचुवाको भरमा कैद गरिएको हो । जस्तो ससुरालाई दायाँ भागमा पक्षघात भएको देखाइको छ र यर्थाथमा दायाँ भागमै पक्षघात भएका व्यक्ति बोल्न सक्दैनन् ।
स्वस्तिमाले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट अभिनय गरेकी छन्, यसमा । मुकुन, लक्ष्मी बर्देवाले आफ्नो चरित्रलाई रोचक र स्वभाविक तुल्याएका छन् ।
के छ जोखिम ?
फिल्ममा मसला खोज्नेहरुले फिल्म नरुचाउन सक्छन् । यसको क्लाइमेक्सले पनि फर्मुला फिल्मका दर्शकलाई चित्त नबुझाउन सक्छ ।
फिल्म कमेडी होइन, लभस्टोरी होइन, एक्सन होइन । हल्काफुल्का मनोरञ्जनको डोज बुलबुलमा खोजेर पाइदैन । किनभने निर्देशकले बजार लक्षित फिल्म बनाएका होइनन्, यसमा आफ्नो शिल्प खिपेका हुन् । हाम्रो जस्तो संवेदनशिल फिल्म बजारमा यो एक जोखिम हो ।
निर्देशक- विनोद पौडेल
कलाकार- स्वस्तिमा खड्का, मुकुन भुसाल, लक्ष्मी बर्देवा, दीपक क्षेत्री आदि
जनरा- सोशल ड्रमा
अवधि – २ घण्टा